Ahoana ny asa any Ghana? - ALinks
Jolay 20, 2021 Maitri Jha Ghana, asa
Raha efa manana fahazoan-dàlana hiasa ianao, na any Ghana ianao, dia azonao atao ny midina mijery ny fomba hahitana asa any Ghana.
Raha tsy manana fahazoan-dàlana hiasa ianao, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mitady asa.
Tranonkala momba ny asa an-tserasera any Ghana
Ireo tranokala asa an-tserasera ambony eto Ghana hanampy anao hahita ny nofinofinao any Ghana amin'ity taona ity dia voatanisa etsy ambany.
JobDirecta Ghana: Jobdirecta Ghana dia tranonkala fikarohana asa malaza any Ghana izay nanampy ireo nahazo diplaoma maro tsy an'asa hahita asa nofinofisiny. Izy ireo dia manao izany amin'ny alàlan'ny fanomezana torolàlana momba ny asa ary koa ny fanaovana toy ny tranonkala fikarohana asa.
Joblist: Ireo mpikaroka asa Ghaneana dia afaka mahita ny asany tadiaviny any Ghana izao nefa tsy mamoaka hatsembohana noho ny Joblist Ghana. Raha mifandray hatrany amin'ny Joblist Ghana ianao ary manana mari-pahaizana matanjaka, dia tsy tokony ho olana ny fahazoana manavao ny asa.
Jobberman: Jobberman dia anarana fanta-daza ao amin'ny lisitr'ireo fikarohana ao Ghana. Ny tranokala Jobberman dia motera fikarohana asa malaza.
Sampan-draharaha misahana ny fandraisana mpiasa tsara indrindra any Ghana
Masoivoho fandraisana mpiasa JobHouse (Ghana)
Ny orinasan'ny HR praiminisitra voalohany ao Ghana, JobHouse Recruitment Agency (Ghana), dia manome outsourcing an'ny mpiasa ambony, consultant amin'ny fandraisana mpiasa, fampandrosoana HR, ary serivisy fametrahana asa.
Labor Power Recruitment and Staffing Solutions Ltd.
Mpiasa manana fahazoan-dàlana sy mpiasa vaovao.
Serivisy matihanina mitarika vokatra (ROPS)
Ny safidinao "mora indrindra" dia ny fampianarana teny anglisy (raha miteny anglisy ianao raha miteny izany). Ireo tranokala rehetra voatanisa etsy ambany dia azo ampitahaina ary manome fampianarana maro be momba ny asa anglisy. Zahao amin'ny tranokala tsirairay raha misy fisokafana asa any Ghana. Jereo ihany koa ity latabatra mahavariana ity avy amin'ny International TEFL Academy, izay mampiseho hoe ohatrinona ny vola azon'ny mpampianatra amina firenena maro manerana an'izao tontolo izao.
ESL Employment: Na dia tsy manintona manokana aza ny UI, iza no mila tranokala mahafinaritra rehefa misy asa fampianarana anglisy be dia be azo isafidianana.
Total ESL: Fifanarahana iray hafa be loatra, saingy miaraka amina plana maro an'isa ho an'ny asa fampianarana any amin'ny firenen-kafa.
ESL Cafe: Dave dia miasa tsara amin'ny famoahana ny sasantsasany amin'ireo fisokafana asa tsara indrindra manerantany.
Tesall: Izy io dia iray amin'ireo mpampiorina asa lehibe.
Ahoana ny asa any Ghanaasa any Ghana
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Bangalore?
asa any Paris ho an'ny karana
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Tirana?
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Dhaka
Ahoana no fomba hahitana asa any Afghanistan
Ahoana ny fomba hahitana asa, lisitry ny asa ambony karama eto Palestine
Afghanistan (11) fanampiana (10) Aostralia (17) Aotrisy (12) Kanada (21) Shina (17) Kolombia (7) Danemark (11) DR Kongo (7) Frantsa (16) Germany (17) mandehana (27) fahasalamana (29) Hong Kong (11) trano fandraisam-bahiny (28) trano (15) India (82) Irak (14) Italia (22) asa (84) Malezia (12) Meksika (22) ny vola (32) Nizeria (12) Norvezy (12) Pakistan (13) mpitsoa-ponenana (36) Rosia (14) Arabia Saodita (9) am-pianarana (20) Espaina (18) fianarana (34) Soisa (7) Thailand (13) zavatra vidiana (107) zavatra atao (48) Travel (159) vorontsiloza (25) Emira Arabo Mitambatra (15) Oganda (9) UK (55) USA (34) rohy mahasoa (23) Venezoela (12) visa ho (92)